छाला | Ratopati
भोलिदेखि राजधानीमा राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी मेला हुँदै access_timeपुस २७, २०७६
काठमाडौं । “कला र कौशल हाम्रो, नेपाली ब्राण्ड नै राम्रो” भन्ने मूल नाराका साथ सातौँ बृहत राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी मेला आयोजना हुने भएको छ । नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघको आयोजना र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मसको सहआ...
मान्छेको छालाको रंग किन भिन्न भिन्नै हुन्छ ? access_timeपुस २४, २०७६
सबैको छालाको रंग एउटै भए कति जाति हुन्थ्यो होला हगि ? कम्तिमा छालाको रंगकै आधारमा मानिस–मानिस बीच भेदभाव त हुने थिएन होला । यो त मीठो कल्पनाको कुरा भयो, व्यवहारमा यस्तो सम्भव हुँदैन । तपाईं हामीमध्येकै कतिपयको छाला सेतो, गहुँ गोरो, कालो, पहे...